मैले छलेर सरकार कब्जा गर्न खोजेको छैनः प्रधानमन्त्री ओली - NepalTimes
मैले छलेर सरकार कब्जा गर्न खोजेको छैनः प्रधानमन्त्री ओली
७ जेष्ठ, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकार गठनको लागि बाटो खोलेको भन्दै छलेर सरकार कब्जा गर्न नखोजेको दाबी गरेका छन्।
शुक्रवार बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले विश्वासको मत लिन नसकिने निश्चित भएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले आफूले बाटो खोलिदिएको दाबी गरेका हुन्।
उनले नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्नुको साटो संसद छलेर सरकार कब्जा गर्न खोजेको नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठन होस् भनेर राष्ट्रपति समक्ष मार्ग प्रशस्त गर्नुको कारण जेठ १५ मा बजेट र त्यो भन्दा अगाडि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भएकाले नै विश्वासको मततिर नलागेर नयाँ सरकार गठनतिर गएको उनले बताए।
उनले जेठ १४ गते सरकार बन्यो भने १५ बजेट कसरी ल्याउँला? भनि प्रश्न गरे। हामीसँग समय छैन आज ७ गते भई सक्यो ? नीति तथा कार्यक्रम कसरी पास गर्ला? समय लिएर विश्वासको मत लिएर काम गर्दा पनि किन यस्तो डाहा उनले प्रश्न गरे ।
बैकल्पिक सरकार बनोस् भनेर विश्वासको मत माग्दा समेत यस्तो फोहोर खेल खेलेर अघि बढ्दा कसरी देश समृद्धिमा अघि बढ्ला ओलीले प्रश्न गरे। ‘मैले छलेर सरकार कब्जा गर्न खोजिएको छैन । विगत एक वर्षदेखि प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउनु मात्र उद्धेश्य बोकेर अघि बढेको तर किन नगरेको?’ उनले भने।
’त्यो कुरा बाहिर आएपछि कृत्रिम र नाटकीय व्याख्या भएको। नयाँ र अचानक आइपुगेके झैँ भनिएको । विश्वासको मत प्राप्त हुँदैनथ्यो। फेरि जाने ५ मै हो,’ उनले भने।
विश्वासको मत लिने कर्मकाण्ड गरेर पराजित भएर फेरि उपधारा ५ मै जानुपर्ने भएपछि नयाँ सरकारको बाटो खोलिदिनु अत्यावश्यक रहेकाले वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि आव्हानका लागि राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेको उनले दाबी गरे।